Qaybtii 3aad: Sheeko Taxane ah halkan kala soco: Xishoodka Hablaha iyo Xanuunka Jacaylka, Sheekadan waxaan daabacnay 2006dii oo dad kor u dhaafay 150 kun oo qof akhriyeen, markale si taxane ah halkan ugala soco | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Qaybtii 3aad: Sheeko Taxane ah halkan kala soco: Xishoodka Hablaha iyo Xanuunka Jacaylka, Sheekadan waxaan daabacnay 2006dii oo dad kor u dhaafay 150 kun oo qof akhriyeen, markale si taxane ah halkan ugala soco
Published on July 13, 2018 by sdwo · No Comments
Hordhac: Waxa Qoray: Cabdiraxman Maxamed Guun
Waa kee jacaylka dhabtii, yaa sheegi kara macnaha jacayl, maku halelay caashaqu mase aragtay ciduu heeryada dulsaartoo intuu halista kadegay ku hab yidhi dushiisoo la heedadaabayoo badan Hadaba hadaad hore in badan u maqashay qays iyo layla, ceebla iyo cantar, cilmi iyo hodan kuwaas oo dhamaan tood ahaa qarniyo hore tolow miyaan dabadood lays jeclaan”?
Qisada buugan cusub ee lamagac baxady (Xishooodka hablaha iyo xanuunka jacaylka) waxay lamaanaysay laba qof oo aad nolosha ugu kala fogaaday.
Qisadan waxay lamid tahay ama ay meelo badan uga eg tahay kuwa dhaca maalin walba balse aan da,yartu in badan u dhugyeelan.
Qaybtii Labaad waxay inoo Joogtay isagoo Subeer warqad u qoraya Salma, iyo salma oo warqadii furtay oo bilowday inay akhrido.
Salma waan ogahay oo kollay in badan ayaad ku dul fekeri doontaa qoraalkagya waxanse si naxariis leh kaaga codsanayaa in aad ku eegto il gacaltooyo qoraalka warqada taasoo aan filayo in aad iigu soo jawaabi doonto sida ugu quruxda badan.”
Subeer, inkasta oo uu iswaydiinayey, tolow go’aanka Salma muxuu noqon doonaa, haddana waxa meesha taal go’aanka ay qaadatay gabadhii Salma ka dib markii ay warqada akhriday iyo siday u aragtay dhambaalkii jaceylka ee uu soo diray Subeer.
Iyadooy sidaa tahay oo uu weli ka wareersan yahay Subeer waxa uu noqon doono go’aanku ayaa waxa u yeedhaya odaygii u aabaha ahaa kuna war galinaya in ay isku raaci doonaan dalka Sacuudi Arabiya laba maalmood kadib halkaas oo ay ka soo iibin doonaan allaabooyin ganacsi oo la xidhiidha ama kamida kuwa uu ka ganacsado aabihii. Sidaa awgeed, Subeer, wuxu aabbihii u sheegay inuu maanta soo diyaar garoobo oo soo hagaajisto Baasaboor iyo wixii kale ee ka dhiman, isla gelinka dambena ay u fadhiisan doonaan xisaabta dukaanka, si ay cid kale ugu wareejiyaan.
Odaygii, goorahanba wuu yaabana, wuuna arkaa inay wiilkii wax si ka yihiin, balse furihii gaadhiga ayuu u dhiibay, wuxuuna ku yidhi, “Aabbo galabta shakibaad leedahaye gaadhigana ilaali, soona dhakhso,” balse Subeer ma haleelin inuu odayga u jawaabo, ka dibna intuu furihii gaadhiga deg deg odayga uga qaaday ayuu gaadhigii deg deg furaha ugu rogay, wuxuna afka saaray goobtii ballanta, cabbaar markii uu taagnaa ayay Salma u timid, kadibna waxa la is dhaafsaday salaan xiiso iyo kalgacaltooyo ka muuqato hase yeeshee markii ay isa salaameen waxa dhacday in ay qadar hal miridh gaadhaya kala aamusnaadaan sidii wax midba gooni shoog u qabsaday dabadeed Subeer ayaa ku tiraabay: “Salmaay waxay ila tahay adiga ayuu ahaa qofka ay arrintu xaggiisa jirtaa ee jawaabta laga sugayaa sidaa awgeed gacaliso soo daa wixii aad inoogu talisay.”
Subeer maskaxdiisu aad ayay u shaqaynaysaa wuxuuna is leeyahay tolow maxaa kaaga iman doona waxaana haysta wal-wal badan. Salma iyadu hore ayay go’aan meel u soo dhigatay oo waa ay haysataa jawaabtii laakiin markiiba afka may kala qaadin ee cabaar ayay hoos u yara foorarstay muddadaasi waxay ahayd qadar ka yar miridh badhkii balse Subeer waxay ku sii siyaadisay culays badan wuxu hoosta ka leeyahay (malaha dayro ayey kuu sidaa waa tan hoos u foorarsatee) dareenkiisa waxa ka muuqata firka nax iyo walbaahar saa’id ah. Salma intay qoorta kor ula soo yara kacday oo ay dhoola caddaysay ayay si degan u tidhi: “waa runtaa oo arrintu aniga ayay ila jirtay oo jawaab ayaa la iga sugayay warqadiina waan akhristay si fiicana waan u fahmay ujeedadii ay xambaarsanayd sidaa awgeed arrintii aad jawaabteeda iga sugaysay markaan dhinac walba ka eegay waan kula qaatay, laakiin waxan ka war sugayaa sida ay arrintaasi kaaga dhab tahay iyo sida aad uga soo baxdo axdigaa.”
Subeer waxa ka go’day falaadh kaga taagnayd garka wadnaha waxaana ka soo booday bahal neef ah kadibna wuxu ku tiraabay “wallaal aad baad u mahadsan tahay aniguna waan ka soo baxayaa waajibkayga” intaa kadib Subeer waxa uu yidhi: “gacaliso, ina wadi aan ku yara sii dhaweeyee dabadeedna way dhaqaaqeen, wadada ay sii marayaan waxa taagan odaygii Dhamal ee Subeer aabihii oo raagsaday wiilkiisa Subeer oo leh “Waar tolow xagee buu wiilkii ku raagay” hase yeeshee Subeer waxba ma arko oo wuxu ku mashquulsan yahay gabadhii Salma oo uu waxoogaa ballan ah ka sii yara gaadhsiinayo wuxuna leeyahay: “wallaal Salmaay beri oo qudha ayaan magaalada joogaa waxaanana maqnaan doonaa ilaa labaatan cisho waayo odayga aabahay ah ayaan isku raacaynaa Sacuudiga oo aanu alaabo ka soo iibinaynaa kadibna waanu soo noqonaynaa markaa gacaliso nooli kulantee na sii sug.”
Salma inkasta oo aanay warkaa ku farxin haddana jawaab diidmo ah kama ay bixin waxayna tidhi: “waayahay waan kaa war sugayaa Illaahayna ha ku soo nabad celiyo.” Subeer oo ka wer wersan odayga aabihii ee sugaya ayaa yidhi: “Wallaal odaygii aabahay ah ayaa I sugayee maca salaama” kadiba way kala dhaqaaqeen. Subeer isma laha odaygu wuu ku arkayay balse odaygu si fiican ayuu ula socday dhaqdhaqaaqa Subeer iyo inay gabadh isku maran yihiin.
Subeer intuu gaadhiga baakinka dhigay ayuu dukaanka deg deg u soo galay kadibana odaygii ayaa ku yidhi: “aabo maxaa kugu dhacay laba saacadood ayaad Iga maqnayd labaatan daqiiqo inaad iga maqnaatana waanu isku ogayn.”
Subeerna wuxu ku jawaabay “aabo waxan tagay gurigeenii oo aan waraaqo ka soo qaatay.”
Odaygii dhamal ayaa isna ku jawaabay: “aabo waraaquhu ma waxay ahaayeen gabadhii aad ku mashquushay ee shidhka gaadhiga kuu saarnayd.” Subeer intuu naxay ayuu xagaa u soo jeedsaday oo hoos u foorarsaday balse intaanu wax hadal ahi ka soo bixin ayuu odaygii ku celiyay “aabo miyaanan mar hore kugu odhan waxba ha iga qarrin, ta kale miyaynaan isku ogeyn in aad guursato oo aanad igu odhan iga war suga, maxaa dhacay ma wixii aanu isku ogeyn wax ka duwan ayaad wadaa.”
Oday Dhamal sheekadii wuu sii waday, wuxuuna yidhi: “aabe Subeerow, wiil yar baad tahaye, geel labo jir soo wada mar, markaa ma aha inaad iga qariso waxaan kula fahmayo, hadhaw-na aan iga qarsoomayn.
Dhamal, wuxuu marba wiilkiisa Subeer ku tuuraa hadal yar oo sidii kaftan ah, laakiin duurxul ah waxaana ka mid ah, hadaladii uu hoosta uga dhiibayey, “Aabo gabadhu tuma ayey ahayd, waa ina ayo, xagee bay degan tahay.”
Subeer oo uu xishood badani ka muuqdo balse waxoogaa sidii hore soo yara dhaamaya maadaama aanu aabihii waxba la diidanayn ayaa isaga oo hoos u foorara wuxuu yidhi; ”Aabe gabadha Salma ayaa la yidhaahdaa, waana xaafadan jaarkeena, waxaana dhalay odayga Abtidoon.”
Dhamal, hadal dambe oo badan uma noqon. Wuxuuna intuu madaxa yara ruxay ku tiraabay “Waan gartay” Dhamal, wuu ka gaws qabsaday arrinta, kumana qancin gabadha aabaheed iyo qoyska uu wiilkiisu gabadha ka soo xushay, laakiin, wiilkiisa madiga ah ee uu jecel yahay ma tusayo dareen diidmo ah iyo wax niyad jab ku rida toona, hadalkiina halkaa ayey ku hakiyeen, dabadeedna Subeer iyo aabihii waxay ku kala foofeen wixii hawlo ah, ee ka dhiman maadaama ay beri wixii ka dambeeya safar gelayaan, wayna kala dhaqaaqeen.
Subeer habeenkii oo dhan hurdo fiican ma ledin, wuxuuna ka fekerayey xaalada jacayl ee ka aloosantay dareenkiisa iyo mustaqbalkiisa nololeed, isla markaana wuxu ka gam’I waayey xusuusta soo noq noqonaysa ee Salma.
Dhinaca kale, isla galabtaa waxa kulan u socdaa ninkii Mursal ee Salma inaabtigeed ahaa iyo odaygii Salma aabadeed ee Xaaji Abtidoon. Mursal wuxuu hadalkiisa ku bilaabay: “Adeer, sidii aan horeba idiinku sheegay viisaha aan sido waxa ku qoran labo qof, labadaa qof mid waa eeddo Ruun, ka kalena waxaan ugu talo galay inaan ku kaxeeyo hadba gabadhii aanu calaf guur isku yeelano iyadoo markii aan xagaa ka soo kicitimayey ku talo galkaygu ahaa in aan dalkii ka soo guursado. Haddaba, adeer, markii aan wax indho indheeyey, , nasiib wanaag waxay dookhayga iyo talodayduba ka wadi waayeen inaan guursado inaabtiday Salma, waxaanan odhan karaa waa Illaaay mahadii haddii ay Eddaday Ruun iyo walaashay Salma noqdaan labada qof ee I raacaya. Markaa adeer, adiga oo aniga iyo inantaba waalid noo ah arrintaasi sideebay kula tahay, ma kula tahay inaad igu darto Salma.”
Dabadeed Mursal inuu soo kacay ayuu odaygii Xaaji Abtidoon gacan qaaday, kuna yidhi: “adeer waad mahadsan tahay ee gudoon wacan.”
Dhinaca kalena waxa ku mudan falaadhii caashaq ee uu garka wadne kaga taagay Subeer iyo axdigii ma dhaafaanka ahaa ee ay la gashay Subeer
La Soco Qaybta Afraad – Maalinta Jimcaha ee 20ka July 2018.